Great British မုန့်ဖုတ်ပွဲ - အားလပ်ရက်ရာသီ ၃ သည် Netflix သို့ယနေ့ညသို့လာမည် - Netflix မူရင်း
Great British မုန့်ဖုတ်ပွဲ - အားလပ်ရက်ရာသီ ၃ သည် Netflix သို့ယနေ့ညသို့လာမည်
Los Angeles, ကယ်လီဖိုးနီးယား - ဒီဇင်ဘာ 14: ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Los Angeles ရှိ 2019 ဒီဇင်ဘာ 14, 2019 တွင် The Grove တွင် Barnes & Noble ရှိအမ်မလီဟက်ကင်ဆန်၏ခရစ်စမတ်ကွတ်ကီးများ။ (Ella Hovsepian / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Mank သည် Netflix သို့ယနေ့ညလာမည် Sabrina အပိုင်း ၄ ၏ Chilling Adventures အပိုင်း ၄ ရက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ Netflix မူရင်း က မဲ Harrington O'Neill လွန်ခဲ့သော5လက
ကလုနီးပါးအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်, cookie ကိုခုတ်နှင့် confectioners '' သကြားထွက်ယူပါ ဗြိတိသျှမုန့်ဖုတ်ပွဲ - အားလပ်ရက်များ ပြန်လာရန် ဤအားလပ်ရက်နှင့်သက်ဆိုင်သောပွဲတော်သုံးပွဲအတွက်တတိယအကြိမ်မြောက်ပွဲသည်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည် Netflix ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့် a.k.a. ပေါ်မှာ။
ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ပြပွဲ ထိုကဲ့သို့သောအကြိုးပွုဖျော်ဖြေရေးသည်နှင့်ငါပို။ ပင်သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက် spinoffs ကိုချစ်။ ငါအညိုရောင်မုန့်ညက်ဖုတ်နိုင်, ဒါကြောင့်မပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူမုန့်ဖုတ်ကိုပြင်းထန်သောဖိအားအောက်မှာထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်အားရစရာဖန်တီးဖန်တီးရန်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ရာသီအလိုက်အထူးအကျွမ်းတဝင်အပျော်တမ်းမုန့်လေးယောက်အဖြစ်၏သွန်းပါလိမ့်မယ် Derry မိန်းကလေးများ ! ငါချစ်သလောက် ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ပြပွဲ နှင့်၎င်း၏ကြားမှာအပေါငျးတို့သ, ငါသည်သူတို့၏မျက်နှာများအားဖြင့်ပြန်မုန့်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကောင်းစွာအလုံအလောက်ပြပွဲမသိရပါဘူး။
အချို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပြီးတွင်ပြိုင်ပွဲဝင်သူ၏အမည်များပါဝင်သည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာလူတွေကမုန့်ဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမြင်နေရချိန်မှာ Nadiya Hussain ရဲ့ရာသီကိုပုံမှန်ပြန်ပြောင်းလေ့ရှိတယ်။
အရ နေပြည်တော် , Derry မိန်းကလေး Saoirse-Monica ဂျက်ဆင်၊ Dylan Llewellyn၊ Siobhan McSweeney နှင့် Jamie-Lee O'Donnell တို့ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ! အဆိုပါသရုပ်ဆောင်များကိုနှစ်သစ်ကူးမှုတ်သွင်းမုန့်ကိုဖန်တီးရန်တောင်းလိမ့်မည်။
တတိယရာသီအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် ဗြိတိသျှမုန့်ဖုတ်ပွဲ - အားလပ်ရက်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နောက်တစ်ခု:Netflix မှာဘာအသစ်လဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂ မှာ Netflix ကထွက်ခွာတာဘာလဲ
ခြင်္သေ့မင်းကြီးသည် 2019 ခုနှစ်တွင်ထွက်လာပေတဲ့အခါမှာ
နောက်ထပ်ဘဝ netflix ရာသီ 2
4 အပြည့်အဝရုပ်ရှင်ကတက် step
ဘယ်အချိန်မှာရာသီ4ထွက်လာကြလိမ့်မည်